राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक आज बस्दै, के संकटकाल लाग्ला ? Global TV Nepal
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक आज बस्दै, के संकटकाल लाग्ला ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । बालुवाटारस्थित परिषद्को कार्यालयमा बिहान नौ बजेका लागि बैठक डाकिएको हो । बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् ।
खासगरी राष्ट्रिय विपत् र सुरक्षामा खतरा पैदा भएका वेला सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय गर्न परिषद्को बैठक बस्छ । देशको सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गर्न पनि आवश्यकता अनुसार बैठक बस्ने चलन छ ।
स्रोतका अनुसार संसद पुनःस्थापना भए के गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलका नेता तथा कुटनीतिक वृत्तसँग छलफल गरिरहेका छन् । विभिन्न दलका नेता र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगपनि प्रधानमन्त्रीले भेट गरेर परामर्श लिइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
खास समयमा बस्ने बैठक आकस्मीक रुपमा प्रधानमन्त्री आव्हान गरेपछि यो बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । कहिँ संसद पुर्नस्थापना भए संकटकाल लगाउने प्रधानमन्त्रीको तयारी हुनसक्छ भनेर पनि विश्लेषण हुन थालेका छन् ।
संसद पुनस्थापनाको पक्षमा अदालतले निर्णय गरे र सुर्य चिन्ह आफूलाई नदिए आन्दोलनका लागि उर्तिने प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै धम्की दिएका छन् । सो धम्की दिएको केही दिनपछि बस्न लागेको परिषद्को बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यसअघि परिषद्को बैठक ५ कात्तिक ०७७ मा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको थियो । त्यहीराति भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’का प्रमुख सामन्त गोयललाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा स्वागत गरेका थिए ।
थपिए ५ सय संक्रमित,८ सय ४० संक्रमणमुक्त
तालिवानको धम्कीपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले देश छाडे
रुवी खानलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश
इजरायलबाट प्यालेस्टाईनलाई आपूर्तिमा अनुमति
‘गजेन्द्र हमाल कांग्रेसबाटै मन्त्री हुनु भयो’ : प्रचण्ड